U-Semalt Uchaza ukuba kutheni i-Website Analytics ibalulekile ekukhuleni kweshishini lakho
Umgaqo ophambili wentengiso eyimpumelelo kukwazi umthengi wakho kwaye unomdla kwiimfuno zabo. Ukuqonda malunga nokuba iindwendwe zakho zewebhu zijonge ntoni kwaye zinike ntoni kuzo zinokwenza okanye ziqhekeze ishishini. Izixhobo zokuhlalutya iwebhusayithi zinokuba negalelo elikhulu ekufumaneni ukuba yintoni eyenza iindwendwe zakho zibeke uphawu kunye nendlela yokuguqula ukutyelela kwabo kuthengise.
Kule nqaku, siza kuchaza ukuba yintoni i-web analytics kwaye kutheni kubalulekile ekukhuleni kweshishini lakho.
Yintoni i-Web Analytics?
Ukuhlaziywa kwewebhu kukuqokelela kolwazi olusekwe kwiwebhu ukufumana ulwazi kunye nokwenza ulwazi ngamava omsebenzisi kunye nobukho be-Intanethi.
Iingxelo zokuhlalutya iwebhusayithi ukuba ngubani otyelela indawo yakho kunye nendlela iindwendwe eziphatha ngayo xa sele zilapho. Ngesixhobo esihle sohlalutyo, unokufumanisa ukuba badala kangakanani iindwendwe zakho, abalingane babo, indawo abahlala kuyo, kunye nokunye okuninzi. Ungafumanisa ukuba, ngokuchofoza nje kwiqhosha, yintoni ebakhokelele kwiwebhusayithi yakho, ukuba bachitha ixesha elingakanani apho kwaye kuliphi iphepha, njl. Olu hlobo lwedatha lubalulekile ekwenzeni iwebhusayithi yakho isebenze ngokusemandleni kunye nasekuyileni Umxholo obhengeza intengiso yakho ekujolise kuyo. Emva koko, unokwenza ukuphuculwa kunye notshintsho ngokweengxelo zokuhlalutya iwebhusayithi; oku kunokuba luncedo kakhulu ekukhuleni kweshishini lakho.
Kutheni le nto ukuhlaziya iwebhusayithi kuluncedo?
Yazi iindwendwe zakho kunye nokuphucula amava abo omsebenzisi!
Xa usenza izigqibo malunga neshishini lakho, kubalulekile ukuba ungakhathaleli abathengi bakho abakhoyo, kodwa apho kunokwenzeka khona ukuphucula amava abo omsebenzisi. Ezo zigqibo kufuneka, kwiimeko ezininzi, zikhonze ukutsala abathengi abatsha. Ngayo yonke le nto engqondweni, ukwazi iindwendwe zakho zewebhusayithi kubalulekile ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo.
Ukuba unoluvo lwenani labantu abakhenkethi kwindawo yakho - oko kukuthi isini sabo, inqanaba labadala, apho bahlala khona, ziphi izinto abanomdla kuzo, njlnjl. Uya kuba kwimeko engcono yokuphucula amava abo omsebenzisi. Ngendlela efanayo, ukuba ungalandela umkhondo wokuba zeziphi izixhobo, iibrowser kunye neenkqubo zokusebenza iindwendwe zakho zivame ukuzisebenzisa xa ufikelela kwindawo yakho, uya kukwazi ukujonga nokuphucula ukuhambelana kwewebhusayithi yakho.
Umzekelo olula kukuba ukuba ulandelela uninzi lweendwendwe zakho usebenzisa izixhobo eziziimobhayili, uya kwazi ukubeka phambili ukwenza iwebhusayithi yakho ibe nobuntu. Ngokufanayo, ukuba izixhobo zakho zokuhlalutya zilandelela ubudala kunye nesini seendwendwe zakho, unokuyilungelelanisa iwebhusayithi ukuze ibe luncedo ngakumbi kwaye ubenomdla kuzo.
Ukwazi iindwendwe zakho yeyona ndlela ilungileyo yokuhambelana newebhusayithi yakho kwimarike efanelekileyo. Ukuphuculwa kolu hlobo kuya kukhuthaza abantu ukuba bahlale kwiwebhusayithi yakho ixesha elide kwaye, ke, kuya kukhokelela kwizinga eliphezulu lokuguqula.
Fumanisa umxholo wakho ophumeleleyo
Izixhobo zokuhlalutya iwebhusayithi ziya kuqaqambisa umxholo wakho. Unokufunda ukuba ngowuphi umxholo okhetha eyona mibono, utyelelo lude kakhulu, kwaye ngawaphi amaphepha abantu abatyelelayo emva. Ngezinye iindlela, ungabona ngokulula ukuba ngowuphi umxholo ophumelele kakhulu, ukuvumela ukuba uwusebenzisele inzuzo yakho.
Umzekelo, nje ukuba uchonge isiqulatho somxholo esidumileyo, unokongeza amakhonkco okuthenga, umnxeba kumaqhosha ezenzo, njlnjalo kwiphepha okanye ubhekise iindwendwe ngokulula kwiphepha lokubhalisa. Ukwazi nje apho kugxilwe khona kwiinzame zakho kuya kukuvumela ukuba unyuse inqanaba lakho lokuguqula kunye neshishini lakho liphela.
Ngendlela efanayo, unokuhlenga-hlengisa amaphepha akhokelayo kwaye wongeze ulwazi olusexesheni okanye uqwalaselo lwayo lonke. Ukongeza, unokubuyisela kwakhona umxholo ophumelelayo kuzo zonke iziteshi kwaye ulungelelanise kunye neendaba zentlalo, izikripthi zewebhu, njl.
Kwakhona, ukulandela ukuthandwa komxholo wakho kuyakuqaqambisa ukuba zeziphi iziqwenga ezingasebenzi kakuhle. Ungachitha ixesha uphucula imixholo engaziwayo, okanye usebenzise nje ukuqonda xa uvelisa umxholo omtsha-ngakumbi ngakumbi - umxholo.
Khuthaza i-SEO yewebhusayithi yakho
Ukusebenza kweinjini yokukhangela (i-SEO) kubalulekile kwimpumelelo yewebhusayithi yakho kwaye ke ngenxa yeshishini lakho. Inani eliphezulu lokugcwala kwiwebhusayithi yakho, liphezulu inani lokukhokelela kunye nokuguqulwa.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kunokunyusa i-SEO yakho ngeendlela ezininzi. Ngokuqonda iindawo onomdla kuzo kunye nezibalo zabantu onomdla kuzo, uyakwazi ukuvelisa umxholo ojolisiweyo kwaye ubonise kuGoogle nakwezinye iinjini zokukhangela. Kwakhona ukulandelela ukuhanjiswa kuya kukunika i-backlinks inights.
Ukuba udibanisa isixhobo sakho sohlalutyo kunye noGoogle, unokulandela umkhondo wamabinzana okukhangela enza uninzi lwezithuthi kwiwebhusayithi yakho. Oku kuluncedo ekuqinisekiseni ukuba la magama aphambili kunye amabinzana asetyenziswa kumxholo wakho kunye nemethadatha.
Unokuya inyathelo elinye ngokuqhubekekayo kwaye usebenzise umkhondo wendlela yokukhangela indawo. Oku kukubonisa ukuba zeziphi iindwendwe ezijonge kubo xa beza kwiwebhusayithi yakho. Olu khetho lohlalutyo lukuvumela ukuba ubone ukuba umxholo wakho okhoyo uyahambelana noko kufunwa ziindwendwe zakho. Ukwazi ukuba ngaba awuhlangani nokulindeleyo kuya kukuvumela ukuba uhlengahlengise umxholo wakho ukuze unikezele ngamava omsebenzisi aphambili kwaye ujike iindwendwe ukuba zibe ngabathengi. Unokuxhasa ezinye izimvo zeposti zeposti entsha.
Ukuthumela kugqithiselwa kwisazisi
Ii-analytics zewebhusayithi zinokulandela umkhondo apho uninzi lokuthumela kwakho luvelaphi Nje ukuba ubonakalise okudlulileyo, ungasebenza kwiindlela zokuzonyusa ngakumbi. Kwakhona ukwazi iindawo zakho ezibuthathaka kuya kukuvumela ukuba ubuphucule kwaye uvelise ukugcwala kwabantu abaninzi kwindawo yakho.
Ukuba, umzekelo, iwebhusayithi yakho ifumana uninzi lweendwendwe zayo ezivela kwiinjini zokukhangela, oku kukuxelela ukuba i-SEO yakho isebenza kakuhle. Ukuba, kwelinye icala, iindwendwe zakho zivame ukuba zivela kwiintengiso ze-Facebook kwaye zingafumaneki kwiinjini zokukhangela, ungenza ngaphezulu kwiphepha lakho le-Facebook ngelixa uzibhrawuza nge-SEO yakho ukuze usebenzise okungcono ii-injini zokukhangela.
Yazi amakhonkco akho aphumayo
Njengokuchonga indawo ovela kuyo, i-analytics yewebhu iya kukuxelela ukuba uthetha nabani, kungenjalo yaziwa njengeekhonkco lokunxibelelana. Nje ukuba udwelise amakhonkco akho aphumayo, ungasebenzisa olu lwazi ukufumana unxibelelwano kunye nabanini bewebhusayithi kwaye ucebise ubuhlakani obusebenzayo.
Ukusebenzisana namanye amashishini kunokunceda okwakho kukhule. Ukunyusa umnqamlezo kunye neziphakamiso eziphakathi neendlela ezintathu zokunceda amashishini akho kubambiswano. Ukwazi ukuba yeyiphi na intsebenziswano kwishishini eya kuba nesiqhamo kakhulu kuwe, kwaye kubo, linyathelo lokuqala lokwakha ubudlelwane obalulekileyo. Ungasondela kwishishini elijolise kulo kwaye wabelane ngengxelo yakho yohlalutyo, ubenze bavume ngakumbi kwisicelo sakho.
Landa umkhondo weemetwork ze-e
Ishishini lakho lingathengisa iinkonzo, iimveliso, isoftware okanye into eyahlukileyo kunye. Nokuba yintoni oyithengisayo, ingxelo yokuthengisa iwebhusayithi yakho yingxelo ebalulekileyo ukuze uqhelane nayo. Ungabona ukuqonda okubalulekileyo njengamaxabiso okuguqula, ukugqithisela okuphezulu, ingeniso iyonke kunye neemveliso ezikhokelayo, njl, zonke ngaphakathi kwengxelo enye. Xa usazi, umzekelo, ukuba yeyiphi imveliso ekhokelayo, ungagxila kwimizamo yakho yokwazisa nangakumbi kwizitishi ezahlukeneyo. Ukuhlala unxibelelana nenkqubo yokudluliselwa nako kuluncedo ekucwangcisweni kwentsebenziswano yexesha elizayo eya kuthi ikhokelele kuthengiso ngakumbi. Ukukhangela i-e-commerce metrics yakho kuyinxalenye eyimfuneko yokukhula kweshishini eliyimpumelelo.
Sisiphi isixhobo seWebhusayithi soHlaziyo endifanele ndisisebenzise?
Zininzi izixhobo zokuhlaziya iwebhusayithi ezikhoyo kwaye kubalulekile ukuba ukhethe isixhobo esibanzi kwinkampani ethembekileyo, ebekekileyo. I-Semalt Web Analytics inikezela ngezixhobo ezahlukeneyo zokuqonda ukunceda ishishini lakho ukuba likhule.
Yasekwa ngonyaka ka-2013, i- Semalt yi- arhente yokusika epheleleyo yedijithali. Babonelela ngezixhobo zewebhu kwiinkonzo eziphambili zohlalutyo kunye noluhlu lwe-SEO kunye nezinye iinkonzo zewebhu. I-Semalt inamakhulu abathengi abonelisekileyo, uninzi lwabo lushiye ukubhalwa kunye nokuhlolwa kwevidiyo kwiwebhusayithi yenkampani.
Jonga uluhlu lwakho lwewebhusayithi
Vavanya ukubonakala kwe-intanethi kwindawo yakho
Phanda iiwebhusayithi ezikhuphisanayo
Chonga iimpazamo ezikwiphepha lokusebenziseka
Fumana iingxelo ezibanzi zewebhusayithi
Iqela eSemalt lithetha iilwimi ezininzi kubandakanya isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, iTurkey, nezinye ezininzi, ke sukukhathazeka malunga nokuba ulwimi lungumqobo phakathi kwakho nokukhula kweshishini. Amalungu eqela aziingcali kwicandelo lakho kwaye akulungele ukuthatha imibuzo.
Ngo-2014, iqela laseSemalt lafudukela kwiofisi entsha. Ukufika kwabo, bamangaliswa kukufumana ufudo kwindawo yokuntywila yeentyatyambo. Emva kophando, bafundile ukuba umnini-ofisi wayephethe yena kodwa bengasamfuni. Iqela lavuya kakhulu ukuba nelinye ilungu. Babugcina ufudo kwaye bambiza ngokuba nguTurbo. Bachitha ixesha befunda malunga nokutya okufanelekileyo kwefudu kunye nendlela yokunyamekela kwaye kungekudala bamthengele i-aquarium entsha. Ngoku, uhlala ngovuyo kwiofisi yaseSemalt kwaye uye wanyuselwa kwinkampani ye-mascot.
Ukufumana ulwazi ngohlalutyo lwewebhusayithi kunokwenza umahluko phakathi kweshishini elikhulayo, unxweme okanye nokuba usilele. Ukwazi iindwendwe zakho kunye nokuba zifuna ntoni kubalulekile ekwenzeni ubukho bakho kwi-Intanethi kunye nokuthengisa ngokufanelekileyo imveliso yakho. Ukukhetha isixhobo esaziwayo njenge-Semalt Web Analytics kuya kukuvumela ukuba ulandelele umxholo wakho kunye nempumelelo yokuthengisa, wazi i-demographic yeendwendwe zakho kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ukuphucula ukutyelelwa kwakho kwinqanaba lokuguqula.